Okubonakalayo, ngoJuni 13-17, 2022
Bhalisa ngoAprili 15 e https://iwcamembers.org/
Iindleko zokubhalisa: $400
Iigranti ezinyiniweyo ezifumanekayo-izicelo kufuneka zifike nge-15 ka-Epreli
Bhalisa nge https://iwcamembers.org/. Khetha iZiko leHlobo lika-2022. Ubulungu kwi-IWCA buyafuneka.
I-IWCA Summer Institute yalo nyaka inokushwankathelwa ngamagama amane: ebonakalayo, yehlabathi, eguquguqukayo, kwaye iyafikeleleka. Sijoyine kwiziko lesibini lasehlotyeni lesibini ngoJuni 13-17, 2022! I-SI ngokwesiko lixesha lokuba abantu babaleke kuxanduva lwemihla ngemihla kwaye bahlangane njengeqela, kwaye ngelixa umkhamo wokuba umke kwizinto zemihla ngemihla kukuwe, iqela lalo nyaka liya kulonwabela ithuba ukunxibelelana neengcali zeziko lokubhala kwihlabathi liphela. Ngoguqulelo loshicilelo, cofa kwi 2022 SI Inkcazo. Njengakwiminyaka edlulileyo, abathathi-nxaxheba banokuthembela kumava ukuba babandakanye umxube onesisa woku:
Ixesha leprojekthi elizimeleyo
Ukucebisa umntu-on-one kunye neqela elincinci
Ukunxibelelana namalungu eqela
Amaqela anomdla okhethekileyo
Eminye imisebenzi ebandakanyayo
Ishedyuli yemihla ngemihla ngokweMida yeXesha
Ukuba ungathanda ulwazi oluthe kratya malunga nokuba ngabaququzeleli kunye neenkokeli zeseshoni zikucwangcisele ntoni, nceda ujonge iishedyuli, ezinikezela ngohambo lwemihla ngemihla, uhambo lweyure ngeyure. Ukulungiselela ukunceda kwakho, zenziwe zacwangciswa kwiindawo ezi-4 ezahlukeneyo zamaxesha. Ukuba eyakho ayibonelelwanga apha, nceda unxibelelane nabaququzeleli, abaya kukubonelela ngento ethile kwindawo okuyo.
Zonke iindibano zocweyo ziya kubanjwa ngonxibelelwano, iqonga lokusasaza bukhoma kunye nophuhliso lobuchwephesha kunye nezinye izixhobo ziya kufumaneka ngokulandelelana. Ngenxa yeendleko eziphantsi zokubamba i-SI ngokuqinisekileyo, ukubhaliswa yi-$ 400 kuphela (ngokuqhelekileyo, ukubhaliswa yi-$ 900). Kuphela ngababhalisi abangama-40 abaya kwamkelwa. Siza kuqala uluhlu lokulinda emva kokubhaliswa kwe-40.
Policy RefundUkubuyiselwa imali ngokupheleleyo kuya kufumaneka ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30 ngaphambi komsitho (ngoMeyi 13), kwaye isiqingatha sembuyekezo siya kufumaneka ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-15 ngaphambi komsitho (ngoMeyi 29). Akukho mbuyiselo iya kubakho emva kwelo nqanaba.
Nceda uthumele i-imeyile kuJoseph Cheatle jcheatle@iastate.edu kunye/okanye Genie Giaimo e ggiaimo@middlebury.edu ngemibuzo.
Ukuba ufuna ukubhalisa kwaye awukabi lilungu, bhalisela i-akhawunti yelungu le-IWCA kwa https://iwcamembers.org/, Emva koko ukhethe i-2022 Summer Institute.
UJoseph Cheatle (yena / yena) nguMlawuli weZiko lokuBhala kunye neMedia kwiYunivesithi yase-Iowa State e-Ames, e-Iowa. Ngaphambili wayenguMlawuli oDityanisiweyo weZiko lokuBhala kwiYunivesithi yaseMichigan State kwaye usebenze njengomcebisi oqeqeshiweyo kwiYunivesithi yaseCase Western Reserve kunye nomcebisi wabafundi abaphumelele kwiYunivesithi yaseMiami. Iiprojekthi zakhe zangoku zophando zijolise kumaxwebhu kunye novavanyo kumaziko okubhala; ngokukodwa, unomdla wokuphucula ukusebenza kweendlela zethu zangoku zamaxwebhu ukuze athethe ngokufanelekileyo kunye nabaphulaphuli ababanzi. Wayeyinxalenye yeqela lophando elijonge amaxwebhu kwiziko lokubhala elafumana imbasa yoPhando oluBalaseleyo lwaMaziko okuBhala aMazwe ngaMazwe. Uye wapapashwa kwi umkhuba, WLN, kwaye i Ijenali yoHlahlo lokuBhala, IKairos, The Ijenali yeZiko lokuBhala, kwaye i Ijenali yoPhuhliso lwaBafundi beKholeji. Njengomlawuli, unomdla kwindlela yokubonelela ngamathuba ophuhliso lobuchwephesha kubasebenzi kunye nabacebisi ngendlela yophando, imiboniso kunye nopapasho. Ukwanomdla kwindlela amaziko okubhala abonelela ngayo ngenkxaso epheleleyo kubafundi ngokusebenzisana namaqabane ekhampasi kunye neengcebiso ngezibonelelo. Ngaphambili wayenguMmeli omkhulu kwiBhodi ye-IWCA, owayesakuba lilungu leBhodi yoMbutho wamaZiko okuBhala e-East Central, kunye nowayesakuba ngusihlalo we-IWCA Collaborative @ 4Cs. Wayekwangusihlalo we-Summer Institute 2021 kunye noKelsey Hixson-Bowles. Wayekhe waya kwiziko lasehlotyeni ngo-2015 elalibanjelwe e-East Lansing, eMichigan.
Genie uNicole Giaimo (SI Co-Chair, bona) nguNjingalwazi oNcedisayo kunye noMlawuli weZiko lokuBhala kwiKholeji yaseMiddlebury eVermont. Uphando lwabo lwangoku lusebenzisa iimodeli ezinobungakanani kunye nomgangatho wokuphendula uluhlu lwemibuzo malunga nokuziphatha kunye nezinto ezenziwayo kumaziko okubhala kunye najikelele, njengezimo zengqondo zomhlohli ngokubhekiselele kwimpilontle kunye neendlela zokuzikhathalela, ukuzibandakanya komhlohli kunye namaxwebhu kwiziko lokubhala, kunye nemibono yabafundi ngamaziko okubhala. . Ngoku ezinze eVermont, iGenie ithanda ukuqubha emanzini avulekileyo, ukukhwela intaba, kunye nokuthethelela iindlela zokusebenza ezinobulungisa kwiindawo zokusebenza zemfundo ephakamileyo. Babenjalo ishicilelwe in umkhuba, Ijenali yoPhando lokuBhala, Ijenali yoHlalutyo lokuBhala, Ukufundisa isiNgesi kwiKholeji yeMinyaka emibini, Uphando kwiMfundo yoLwazi lokuFunda nokuBhala kwi-Intanethi, IKairos, Ngaphesheya kweeNgcebiso, Ijenali ye-Multimodal Rhetoric, kunye neengqokelela ezininzi ezihleliweyo (Utah State University Press, Parlor Press). Incwadi yabo yokuqala yingqokelela ehleliweyo Impilontle kunye neNkathalo kwiZiko lokuBhala uMsebenzi, iprojekthi yedijithali evulekileyo. Incwadi yabo yangoku, Ukungahambi kakuhle: Ukukhangela iMpilontle kwiZiko lokuBhala leNeoliberal naNgaphaya uphantsi kwesivumelwano kunye ne-Utah State UP.
IiNkokheli zeZiko laseHlobo:
UJasmine Kar Tang (yena) unomdla wokuphonononga ukuba i-intersection ye-Women of Color feminisms kunye neZiko lokuBhala Izifundo zibukeka njani ngokubonisana ngokubhaliweyo, ukwenza umsebenzi wokulawula, ukuququzelelwa kweqela, kunye ne-minutiae yomsebenzi wokulawula. Intombi yabaphambukeli abavela eHong Kong naseThailand, uye waphonononga malunga ne-sociohistorical particularities zendlela amandla obuhlanga aphunyezwa ngayo kumzimba wase-Asia kwiziko lokubhala lase-US. UJasmine usebenza kwiYunivesithi yaseMinnesota–Twin Cities njengoMphathi-Co-Director weZiko lokuBhala kunye neProjekthi yokuBhala yaseMinnesota nanjengelungu leFaculty eDibanisayo kwiLiteracy and Rhetorical Studies. U-Jasmine ukwasebenzisa uqeqesho lwakhe kwindima yakhe njengomdlalo weqonga we-Aniccha Arts, umfuniselo wentsebenziswano yobugcisa kwiTwin Cities.
UEric Camarillo (yena/yena) nguMlawuli we-Learning Commons eHarrisburg Area Community College apho ajongene novavanyo, ithala leencwadi, inkxaso yabasebenzisi, kunye neenkonzo zokufundisa kubafundi abangaphezu kwe-17,000 kwiikhampasi ezintlanu. I-ajenda yakhe yophando ngoku igxile kumaziko okubhala kunye nezenzo ezilungileyo ngaphakathi kwezi zithuba, ukuchasana nobuhlanga njengoko kusebenza kwiinkqubo zamaziko okubhala, kunye nendlela ezi zenzo eziguquka ngayo kwiindlela ezihambelanayo kunye ne-synchronous online. Uye wapapasha kwi Ukuphononongwa koontanga, iPraxis: Ijenali yeZiko lokuBhala, yaye Ijenali yeeNkqubo zeNkxaso yezeMfundo. Ubonise uphando lwakhe kwiinkomfa ezininzi ezibandakanya i-International Writing Centre Association, i-Mid-Atlantic Writing Centre Association, kunye neNkomfa yokuBunjwa kweKholeji kunye noNxibelelwano. Ngoku unguMongameli weNkomfa yeSizwe yokuFundisa ngoNtanga ekuBhaleni kunye noMhleli woPhononongo lweNcwadi Ijenali yeZiko lokuBhala. Ukwangumgqatswa wobugqirha kwiYunivesithi yaseTexas Tech.
Rachel Azima (yena) ukunyaka wakhe weshumi ekhokela iziko lokubhala. Okwangoku, usebenza njengoMlawuli weZiko lokuBhala kunye noNjingalwazi oDityaniswayo wokuSebenza kwiDyunivesithi yaseNebraska-Lincoln. URachel nguSihlalo oSebenzayo weBhodi yesiGqeba yamaZiko okuBhala aseMidwest kunye nommeli we-MWCA we-IWCA. Uphando lwakhe oluphambili kunye nomdla wokufundisa kuluntu, ngakumbi ubuhlanga, ubulungisa kumaziko okubhala. Umsebenzi kaRakeli usanda kuvela kwi Ijenali yeZiko lokuBhala kwaye iza kuzo zombini WCJkwaye umkhuba. Iprojekthi yakhe yangoku yophando lwentsebenziswano kunye noKelsey Hixson-Bowles kunye noNeil Simpkins ixhaswe yiSibonelelo soPhando se-IWCA kwaye igxile kumava eenkokeli zemibala kumaziko okubhala. Ukwasebenzisana noJasmine Kar Tang, uKatie Levin, kunye noMeredith Steck kwiCFP kwingqokelela ehleliweyo yolongamelo lweziko lokubhala.
UVioleta Molina-Natera (yena/wakhe) unePh.D. kwezeMfundo, i-MA kwiLinguistics kunye neSpanishi, kwaye yi-Speech Therapist. UMolina-Natera nguNjingalwazi oNxibeleleyo, umseki kunye nomlawuli weZiko lokuBhala laseJaveriano, kunye nelungu leQela loPhando loNxibelelwano kunye neeLwimi ePontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). Ungumseki kunye nowayesakuba ngumongameli weLatin American Network of Writing Centres and Programs RLCPE, ilungu lebhodi ye: International Writing Centre Association IWCA, emele iLatin America, iLatin American Association of Writing Studies kwiMfundo ePhakamileyo kunye neeProfessional Contexts ALES, kunye neTransnational. I-Consortium yoPhando ngokuBhala. UMolina-Natera ukwangumhleli wemibhalo yeSpanish yecandelo laseLatin America loTshintsho lwaMazwe ngaMazwe ngezifundo zokubhalwa kweWAC Clearinghouse, kunye nombhali wamanqaku kunye nezahluko zencwadi malunga namaziko okubhala kunye neenkqubo zokubhala.
AmaZiko eHlobo adlulileyo